Debian 10.10, patches patches uye yazvino vhezheni yeFWUPD | Linux Vakapindwa muropa
Tichifunga nezve kutanga kweBullseye uye mushure meiyo yapfuura poindi yekuvandudza v10.9, chirongwa cheiyi yakasimba yekushandisa system baba nasekuru vevamwe vazhinji akakanda maawa mashoma apfuura Debian 10.10. Semazuva ese, yeuka kuti haisi vhezheni itsva, asi kuti zviripo mifananidzo mitsva yeCD uye kuti zvese zvakabatanidzwa muna10.10 zvasvika sechigadziro kana zvichakurumidza kune vashandisi varipo.
Kufanana neese ma OS anovandudzwa anoita chirongwa ichi, Debian 10.10 yasvika ramba uchigadzirisa zvikanganiso kubva kuBuster iyo yakaburitswa pasi pemakore maviri apfuura. Uye iyo ndeimwe yemakadhi ebhizinesi aDebian: sisitimu ine software isinganatsiridzwe, asi yakasimba kwazvo nekuda kwehunyanzvi hwekuchengetedza umo zvese zvavanosanganisira zvinopfuura kuratidzwa uye vanopedza iyo yasara yenguva kugadzirisa izvo zvatovepo.
Zvimwe zvinhu zvitsva muDebian 10.10
Pakati pezvinhu zvitsva kana kururamisa zvakaverengerwa naDebian 10.10, isu tine:
Kubvumirana neiyo yazvino vhezheni yakagadzika yeFWUPD.
Kwidziridzo kuLinux ABI 4.19.0-17.
Nyowani vhezheni ye shim yeEFI masisitimu uye mamwe magadziriso.
Zvigadziriso zvekuchengetedza zvakapararira pamazhinji software kubva kuFirefox ESR kuenda kuDocker.io, OpenSSL, Curl, uye mamwe akajairwa mapakeji.
ari mifananidzo mitsva Debian 10.10 inowanikwa pa Iyi link. Sezvatatsanangura, v10.10 haisi vhezheni itsva zvachose, saka hapana chikonzero chevashandisi varipo kuti vadzorere kana kuisa yakachena kuisa.
Tichifunga nezvenguva, hazvizivikanwe kuti inotevera Debian kuburitswa ichavei, asi ingangoita v10.11. Debian 11 ichaenda "yakazara chando" mune ingangoita mwedzi, uye zuva rekuburitsa iro rakatsiga vhezheni harizozivikanwe kutozosvikira risati raitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian 10.10 inosvitsa kuchengetedzeka zvigamba, yakagadziridzwa kernel uye yazvino vhezheni yeFWUPD